2010 | လင်္ကာဒီပအရှင်
ပ၀ါရဏာ၏ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း
သုံးလောကထွဋ်ထား ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည် သာသနာဖြန့်ဖြူးရာ ဗဟိုဌာနချုပ် သဖွယ်ဖြစ်သော သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ်သူဌေး + ပုညလက္ခဏဒေ၀ီတို့ စေတနာဖွေးဖြူ ပေးလှူ ဆောက်လုပ် အပ်သော ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်၌ သီးတင်းသုံး စံနေတော် မူစဉ်ကာလက ဖြစ်၏၊
သံဒိဋ္ဌ( မြင်ဘူးကာမျှမိတ်ဆွေ ) သံဘတ္တ (အတူနေ အတူစား မိတ်ဆွေ) ဖြစ်ကြသော ရဟန်းတော်တို့သည် ကောသလတိုင်း တစ်ခုသော ဇနပုဒ်၌ ၀ါဆို ၀ါကပ်ကြ၏၊ ၀ါဆိုပြီးကြ သော အခါ ၀ါတွင်းသုံးလ ကာလပတ်လုံး ညီညီညွတ်ညွတ် ငြင်းခုံခြင်းမရှိကြပဲချမ်းချမ်း သာ သာ နေနိုင်ရန်နှင့် ဆွမ်းကိစ္စ မပင်မပန်း ချမ်းသာမည့် နည်းလမ်းကို တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းကြ၏။
အဖြေကား အချင်းချင်း စကားမပြောပဲ ၀စီပိတ်ကျင့်စဉ်ကို ကျင့်သုံးရန် အားလုံး သဘောတူကြ၏။ သဘောတူထားကြသည့်အတိုင်း တစ်ပါးနှင့်တစ်ပါး စကားမပြောကြတော့၊
( သစေ ခေါ မယံ အညမညံ နေ၀ အာလပေယျာမ၊ န သလ္လပပေယျာမ )
သို့သော် ဆွမ်းခံပြန်လာသောအခါ ဦးဆုံးပြန်ရောက်သော ရဟန်းတော်က ဆွမ်းကျောင်းမှာ ခြေဆေးရေ နှင့် ခြေဆေးအင်းပျဉ်ကို ပြင်ထား နှင့်၏ နေရာ ခင်းထား၏၊ ဆွမ်းမကုန်လောက် က ထည့်ရန် ဆွမ်းဇလုံပြင်ထား၏၊သောက် ရေ သုံးရေ ထည့်ထားနှင့်၏၊
နောက်ဆုံးမှ ပြန်ရောက်သော ရဟန်းတော်က ဆွမ်းမလောက်လျှင် ဆွမ်းဇလုံမှ ဆွမ်းကို ယူဘုဉ်းပေး၏၊ ဘုဉ်းပေးပြီးလျှင် ဆွမ်းကျန်ကို စိမ်းစိုသော မြစ်သစ်ပင်မရှိရာ မြေ၊ ပိုးမရှိရာ ရေ၌ စွန့်ပစ်၏၊ ဆွမ်းဇလုံကို ဆေးကြောပြီး သိမ်း၏ နေရာထိုင်ခင်း သိမ်း၏၊ ခြေဆေး ရေ ခြေဆေးအင်းပျင်းသိမ်း၏ တံမျက်လှည်း၏၊
သောက်ရေ သုံးရေ သန့်သက်ရေအိုးတို့ ရေမရှိလျှင်တွေ့မြင်သော ရဟန်းတော်က ရေခပ်ထည့်၏ တစ်ပါးတည်း မနိုင်လျှင်အဖေါ်ရဟန်းတစ်ပါးကို လက်ဟန်ပြခေါ်ကာ ရေခပ် ထည့်၏၊ ဤနည်း ဤစည်းကမ်း ဤစနစ်ကို တစ်ဝါတွင်းလုံး ကျင့်သုံးကြ၏၊
ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်က ၀ါကျွတ်လျှင် ရဟန်းတော်များ ဘုရားးရှင်ကို
သွားရောက် ဖူးမျှော်ခြင်း အစဉ်အလာရှိ၏၊ ယင်းအစဉ်အလာအရ ထိုရဟန်းတော်တို့သည် လည်း ၀ါလကျွတ်သော အခါ ဘုရားရှင် သီတင်းသုံးရာ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်း
တော်သို့ သွားရောက်ကာ ဘုရားရှင်ကို ဖူးမျှော်ကြ၏
အာဂန္တုက ရဟန်းတို့နှင့် ဘုရားရှင် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ အလ္လာပ သလ္လာပစကား
ပြောဆိုခြင်းသည် ဓမ္မတာဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ ထိုရဟန်းတော်တို့အား ၀ါတွင်းကာလ ချမ်း
ချမ်းသာ ညီညီညွတ်ညွတ်နှင့် ဆွမ်းကိစ္စ မပင်မပမ်း ရှိ မရှိ မေးတော်မူ၏။
( ယင်းသို့ မေးတော်မူခြင်းသည် တရားစကားဟောပြောရန်နှင့် တပည့်တို့အား သိက္ခာပုဒ်ပညတ်ရန် အကြောင်းတစ်ခုခုအတွက် မေးတော်မူခြင်းဖြစ်သည် )။
ထိုရဟန်းတော်တို့လည်း သူတို့ကျင့်သုံးသော စကားမပြောဝစီပိတ်ကျင့်စဉ်ကို ကျင့်သုံးကာ ညီညီညွတ်ညွတ် ငြင်းခုံခြင်းမရှိပဲ ချမ်းချမ်းသာသာနေကြခြင်းနှင့် ဆွမ်းကိစ္စ မပင်မပမ်း ရှိသည့်အကြောင်းကို ဘုရားရှင်အား အကြောင်းစုံ ပြန်လည်လျှောက် ထားကြလေသည်။
ထိုအခါ ဘုရားရှင်သည် ထိုရဟန်းတော်တို့၏ အချင်းချင်း စကားမပြောသော ၀စီပိတ်ကျင့်စဉ်ကို ကဲ့ရဲ့တော်မူ၏၊ မဂ်ဖိုလ်မှ အချည်းနှီးယောက်ျားဟု ရှုတ်ချတော်မူ၏၊ နွားတို့၏နေခြင်း ၊ ရန်သူတို့၏နေခြင်းဟု ပြစ်တင်တော်မူ၏၊ ယင်းအကျင့်သည် တိတ္ထိတို့
ကျင့်သုံးသော သူအ ကျင့်စဉ်ဖြစ်၏၊ အကြည်ညိုမဲ့ရန်ဖြစ်၏ဟု ဝေဘန်ထောက်ပြတော်မူ၏၊ ယင်းတိတ္ထိကျင့်စဉ်ကို ကျင့်သုံးလျှင့် “ ဒုက္ကဋ်အာပါတ် ” သင့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ထို့နောက် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည် ဆက်လက်၍ “ ရဟန်းတို့ ၀ါမှထသော ရဟန်းတို့
အား မြင်၍ဖြစ်စေ ကြား၍ဖြစ်စေ ယုံမှား၍ဖြစ်စေ သုံးပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် ဖိတ်ကြားခြင်း
ပ၀ါရဏာ ပြုခြင်းငှာ ခွင့်ပြု၏ ၊ ထိုသို့ ဖိတ်ကြားခြင်းသည် သင်(ရဟန်း)တို့အတွက် အချင်းချင်း
လိုက်လျောခြင်း ၊ အာပါတ်မှ ထမြောက်စေခြင်း ၀ိနည်းကို ရှေ့ရှု ခြင်းဖြစ်လတ္တံ ” မိန့်တော်မူ
ကာ “ ပ၀ါရဏာကို ” စတင်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပေသည်၊
ပ၀ါရဏာပြုပုံ - သံဃံ (အာဝုသော )ဘန္တေပ၀ါရေမိ၊ ဒိဋ္ဌေန၀ါ သုတေန၀ါ ပရိသင်္ကာယ၀ါ
၀ဒန္တုမံ အာယသ္မန္တော အနုကမ္ပံ ဥပါဒါယ၊ ပဿန္တော ပဋိကရိဿာမိ (ဒုတိယမ္ပိ ဘန္တေသံဃံ - - ၊ တတိယမ္ပိ ဘန္တေသံဃံ - )
အရှင်ဘုရားတို့ သံဃာကို ဖိတ်ကြားပါ၏၊ မြင်၍ဖြစ်စေ ကြား၍ဖြစ်စေ ယုံမှား၍ဖြစ်စေ အရှင်ဘုရားတို့သည် တပည့်တော်အာား အစဉ်သနားခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ (အပြုသဘော ဖြင့် ) ပြောဆိုကြပါကုန်လော့၊ ( လွန်ကျူးမိသော အပြစ်ရှိခဲ့သော် ) ကုစားပါအံ့။
( မောဟ မကင်းသေးသောလောက၌ တစ်ခါတစ်ရံ အမှားများ လွန်ကျူးမိတတ်၏၊ သို့သော်
မိမိအမှားကို မိမိမမြင်၊ ပါတ်ဝန်းကျင်ကားမြင်၏၊ ယင်းသို့ မြင်သောအခါ အပြုသဘောဖြင့် အမှားထောက်ပြ၍ အမှန်ရောက်အောင် လမ်းညွှန်ပေးခြင်းသည် ကောင်းမြတ်သော လမ်းစဉ်ဖြစ်ပေသည်၊ အမှားကို ပြုပြင်ခြင်းသည်လည်း သူတော်ကောင်းတို့၏ အလေ့ကောင်း တစ်ခုပင် ဖြစ်ပေသည် ၊ အမှားထောက်ခြင်း - အမှန်လျှောက်ခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသော ဘ၀ကို
ဘာလိုလိုနှင့် ကောသလတိုင်း ဇနပုဒ်တစ်ခုကို အမှီပြုကာ ၀ါဆိုလာခဲ့သည်မှာ သီးတင်းကျွတ်ဖို့ပင် နီးကပ်လာချေပြီး၊ သီတင်းကျွတ်လျှင် (ပ၀ါရဏာပြုပြီးက ) လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့် ရှိသည့်အတွက် ရဟန်းတော်များခရီးထွက်ကြပေတော့မည်၊ ရဟန်းစုများ ကွဲကွာ၍ ခွဲခွါကြရပေတော့မည်၊ ယင်းသို့ဖြစ်လျှင် ညီညီညွတ်ညွတ် ချမ်ချမ်းးသာသာ နေထိုင်ကာ လက်ရှိခံစားနေကြရသော ( သမထ ၀ိပဿနာ ) ချမ်းသာများမှ အပဖြစ်ကြ ပေတော့မည် ၊ဘယ်လိုများ ကျင့်သုံးကြရပါအံ့နည်းဟု - ကောသလတိုင်း ဇနပုဒ်နေ ရဟန်းတော်များက ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကို လျှောက်ထားကြ၏။ ( အညတရော ဖာသုဝိဟာရောတိ တရုဏသမထော ၀ါ တရုဏ၀ိပဿနာ ၀ါ )
ထိုအခါ ယင်းရဟန်းတော်တို့အား ” ပ၀ါရဏာ သင်္ဂြိုဟ် ထောက်ပန့်ခြင်းကို
ပြုခြင်းငှာ ခွင့်ပြု၏ ” ဟု မိန့်တော်မူ၏၊
ထိုရဟန်းတော်တို့သည် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၌ ဥပုသ်ပြု၏ ပါတိမောက်ပြ၏၊
ကုမုဒြာပွင့်ချိန် မိုးလေးလအဆုံး တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့၌ ပ၀ါရဏာပြုခွင့်ရ၏
( ဤကား ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် အကျဉ်းမျှသာတည်း အကျယ်သိလိုမူ ၀ိနည်းမဟာဝါ
ပ၀ါရဏက္ခန္ဓက၌ ကြည့်ရှုကြပါလေ ) ။
Posted by linkardipa-ashin at 11:53 AM
(Buddha’s Teachings are not for Knowledge only but also for Self
Practice & Implementation)
အနှစ်သာရရှိလှခြင်း - ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် အဆုံးအမ အားလုံးသည် ဗဟုသုတရရုံပါးစပ်ဖျားလေးမှ ပြောနေ ဟောနေရုံမျှ လမ်းဆုံး နေတာမျိုးတစ်ခွန်းမျှမရှိခဲ့ပါဘူး။ အဆုံးအမတိုင်းသည်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ ကျင့်ရမယ်ပြီးမှမိမိနှင့်အများအကျိုးအတွက် အကျိုးရှိအောင်လက်တွေ့အသုံးချပြီးမှသာလျှင် အဓိပ္ပာယ် ပြည့်စုံပြီး ပန်းတိုင်(နိဗ္ဗာန်) သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်း သည်သာ အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။
လူချမ်းသာ နတ်ချမ်းသာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ သုံးမျိုးသောချမ်းသာတို့တွင် လူနှင့်နတ်ချမ်းသာတို့သည် ဒုက္ခသစ္စာနယ်(ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ချုပ်ပျောက်ခြင်း တို့က အစဉ်ထာဝရနှိပ်စက်သောနယ်) ထဲတွင်သာ ခံစား နေရပြီး သုံးဆယ့်တစ်ဘုံသံသရာလည်စေပြီး ချမ်းသာအတုဖြစ်သည်။
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ (မဖောက်မပြန် ပြုပြင်စီရင်မှုမရှိ ငြိမ်းအေးမှုအပြည့် ဒုက္ခအားလုံးချုပ်ဆုံးခြင်း သံသရာမှလွတ်မြောက်ခြင်း ) သည်သာလျှင် မဟာသန္တိ သုခ ချမ်းသာအစစ် ဖြစ်ပေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ဘုရားကန်တော့ကြစဉ် သြကာသမှစပြီး ရွတ်ဆိုကြသည်။ (သြကာသ ဆိုသည်မှာ ခွင့်ပြုပါဘုရားဟု ခွင့်တောင်းခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ လူယဉ်ကျေးတို့၏ အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည်)
သြကာသရွတ်ပြီး ဘုရားရှိခိုးနေစဉ် ဘုရားရှင်၏ ပုံတော် (အကာ)ကိုကြည့်ပြီး ဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော် (အနှစ်)ကိုရည်မှန်းပြီးကန်တော့မှသာလျှင် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံပေသည်။
သြကာသဖြင့် ဘုရားကန်တော့ပြီးနောက် ဤသို့ ကန်တော့ရသော အကျိုးအားကြောင့် အပါယ်လေးပါး ကပ်သုံးပါးရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး စသည်ဖြင့် ဘေးအပေါင်းမှလွတ်ရန် ရှည်လျားလှစွာသော ဆုတောင်းများကို
ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ပါးစပ်ဖျားလေးဖြင့် ဆုတောင်းကာ နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ ကိုပင်လျှင် ပါးစပ်ဖြင့် တောင်းရုံနှင့်ရသကဲ့သို့မှားယွင်းစွာ ဆုတောင်းနေကြပေသည်။ အမှန်မှာ ဆုတောင်းသကဲ့သို့ လက်တွေ့ ကျင့်ရန်သာ အဓိက ဖြစ်သည်။
(က) အပါယ်လေးပါး ဘေးမှလွတ်ရန်ကား အပါယ်လေးပါးဆိုသော အဓိပ္ပာယ်နှင့် အပါယ်ကျစေနိုင်သော
အကြောင်းတရားနှင့် အပါယ်လွတ်ရန် ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ရမည့်တရားတို့ကို သိရှိ လေ့ကျင့်ရန် လိုပေသည်။
(၁) တိရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်ခြင်းသည် မောဟ (အမှားသိတွေဝေ) ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၄င်းမောဟဆိုသော အကြောင်းကို သတ်မှသာလျှင်အကျိုးတိရစ္ဆာန်ဘုံ မရောက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
(၂) ပြိတ္တာဘုံရောက်ခြင်းသည် လောက (လိုချင်တပ်မက်) ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၄င်းလောဘဆိုသော အကြောင်းကို သတ်မှသာလျှင် အကျိုးပြိတ္တာဘုံ မရောက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
(၃) အသူရကာယ် (အရံငရဲ) ဘုံရောက်ခြင်းသည် မာန (ထောင်လွှားမှု)ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၄င်းမာနဆို သောအကြောင်းကို သတ်မှသာလျှင် အကျိုး အသူရကာယ်ဘုံ မရောက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
(၄) ငရဲဘုံရောက်ခြင်းသည် ဒေါသ (ကြမ်းတမ်းခက်ထန်) ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၄င်းဒေါသဆိုသော အကြောင်း ကို သတ်မှသာလျှင် အကျိုးငရဲဘုံ မရောက် ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
အပါယ်လေးပါးမှ လွတ်ချင်ပါ၏လို့ ဆုတောင်းနေရုံဖြင့်အပါယ်မှမလွတ်နိုင် အပါယ်ရောက်စေနိုင်သော လောဘ ဒေါသ မောဟ မာနတို့ကို ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ပယ်သတ်မှသာလျှင် လွတ်နိုင်ပေမည်။
(ခ) ကပ်သုံးပါးဘေးမှလွတ်ရန်ကား ကပ်သုံးပါး၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ကပ်ဘေးကို ဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းတရား (မီး) ကို သိရန်လိုအပ်ပြီး အကြောင်းကိုခေတ္တထိန်းနိုင်သော တရားနှင့် အကြောင်းတရား (မီး) ကို အငုတ်ပြုတ်စေနိုင်သော တရားကိုသိရှိလေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်ပေသည်။
၁။ ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ် (ငတ်မွတ်ဘေး)
လောဘ ( ဖြစ်စေသော အကြောင်း (မီး) )
၂။ သတ္ထန္တရကပ် (သတ်ဖြတ်ဘေး)
ဒေါသ ( ဖြစ်စေသော အကြောင်း (မီး))
သီလ (ကာယ၀စီစောင့်ထိန်း) (ခေတ္တထိန်း)
၃။ ရောဂန္တရကပ် (ရောဂါဘေး)
မောဟ ( ဖြစ်စေသော အကြောင်း (မီး))
ဘာဝနာ (အဖန်တလဲလဲရှုမှတ်ပွားများ) (ခေတ္တထိန်း)
ငတ်မွတ်ဘေး (ကပ်) ဖြစ်ရခြင်းသည် လောဘအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၄င်းလောဘမီးကိုခေတ္တခဏအားဖြင့် ဒါနပြုခြင်းဖြင့် ထိန်းထားနိုင်သည်။ သတ်ဖြတ်ဘေး (ကပ်) သည် ဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၄င်းဒေါသကို ခေတ္တခဏအားဖြင့် သီလဖြင့် ထိန်းထားနိုင်သည်။ ရောဂါဘေး (ကပ်) သည်မောဟကြောင့် ဖြစ်ပြီး ၄င်းမောဟကို ခေတ္တခဏအားဖြင့် ဘာဝနာဖြင့်ထိန်းထားနိုင်သည်။ ကပ်သုံးပါးစလုံး အငုတ်ပြုတ်နိုင်ရန်ကား ၀ိပဿနာ၊ ဘာဝနာ (အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊ အနတ္တ) ရှုမှတ်ပွားများ နေရမည်ဖြစ်သည်။ ကပ်သုံးပါးမှ လွတ်မြောက်ချင်ပါ၏လို့ ဆုတောင်းနေရုံမျှဖြင့် ကပ်သုံးပါးမှ မလွတ်နိုင်၊ ကပ်သုံးပါးကို ဖြစ်စေသော လောဘမီး ဒေါသမီးမောဟမီး တို့ကို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း လေ့ကျင့်ပြီး ပယ်သတ်၊ အားလုံးသောသတ္တ၀ါအပေါင်းတို့မှလည်း လေ့ကျင့်ပြီးပယ်သတ်နိုင်ကြမှသာလျှင် ကပ်ဘေးတို့မှ လွတ်မြောက် နိုင်ပေမည်။
ဒုစရိုက် (၁၀) ပါး (ဒု = မကောင်းသော၊ စရိုက် = အကျင့်)
(က) ကာယကံ (၃) ပါး
(၁) သတ် (သတ္တ၀ါများ)
(၂) ခိုး (တစ်ပါးသူပိုင်ပစ္စည်း)
(၃) ဖောက်ပြန် (ကာမဂုဏ်)
(ခ) ၀စီကံ (၄) ပါး
(၁) လိမ် (မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်း)
(၂) ကုန်းတိုက် (ညီညွတ်မှုပြိုကွဲစေခြင်း)
(၃) ကြမ်းတမ်း (ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်း)
(၄) အချည်းနှီး (အကျိုးမရှိသောစကားပြောခြင်း)
(ဂ) မနောကံ (၃) ပါး
(၁) အဘိဇ္ဈာ (သူတစ်ပါးပစ္စည်း မတရား ရစေလိုခြင်း)
(၂) ဗျာပါဒ (သူတစ်ပါးကိုသေကြေပျက်စီးစေလိုခြင်း)
(၃) မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ (အယူမှားခြင်း)
ဒုစရိုက် (၁၀) ပါး ပွား (၄၀)
(၁) ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန် (၁၀) ပါး
(၂) သူတစ်ပါးအားစေခိုင်း (၁၀) ပါး
(၃) သွယ်ဝိုက်အားပေး (၁၀) ပါး
(၄) ၀မ်းမြောက် (၁၀) ပါး
သုစရိုက် (၁၀) ပါး (သု = ကောင်းသော၊ စရိုက် = အကျင့်)
(က) ကာယကံ (၃) ပါး (ခ) ၀စီကံ (၄) ပါး (ဂ) မနောကံ (၃) ပါး
ဒုစရိုက် (၁၀) ပါးကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် သုစရိုက် (၁၀) ပါး ဖြစ်သည်။
သုစရိုက် (၁၀) ပါးလည်းပွားလျှင် (၄၀) ရသည်။
(၁) ကိုယ်တိုင် (၂) စေခိုင်း(၃) အားပေး(၄) ၀မ်းမြောက်
မှတ်ချက်။ ။ ၄င်းဒုစရိုက်/သုစရိုက်တို့သည်လည်း ပါးစပ်ဖျားဖြင့်ပြောနေဟောနေရုံမျှဖြင့် အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံဘဲ ဒုစရိုက်ကိုကိုယ်တိုင်လုံးဝရှောင်ကြဉ်ကြပြီး သုစရိုက် ကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်ကြပြီး မိမိနှင့် အများအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလျှင် ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဗြဟ္မစိုရ် (၄) ပါး
မေတ္တာ = တစ်ပါးသူအား ကောင်းစေချင်သော စေတနာအပြုမြင်ဝါဒ
(တန်းတူတွေ့လျှင် မေတ္တာ မပွားနိုင်က ပြိုင်တတ်သည်။)
ကရုဏာ = တစ်ပါးသူအား ၀ဋ်ဒုက္ခဘေးဆင်းရဲတို့မှ
လွတ်မြောက်စေလိုသော စေတနာ (ကိုယ့်အောက်နိမ့်လျှင် ကရုဏာမထားနိုင်က
မုဒိတာ = သူတစ်ပါးကောင်းစားတာဝမ်းမြောက်ခြင်း (ကိုယ့်ထက်သာလျှင် မုဒိတာမပွားနိုင်က
ဥပေက္ခာ = ချစ်လည်းမချစ်၊ မုန်းလည်းမမုန်းခြင်း ( လစ်လျူရှုခြင်း ) ( သတ္တ၀ါအားလုံးတို့သည် မိမိပြုသော ကံအတိုင်းကိုသာမိမိရကြသည်)
မှတ်ချက်။ ။ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးသည် နတ်လူသတ္တ၀ါ အားလုံးတို့၏ ချစ်ဆေးဖြစ်ပြီး ပါးစပ်ဖျားမှပြောနေရုံမျှဖြင့် မပြည့်စုံနိုင်ပေ။ နေ့စဉ်မိမိတို့၏ရုပ်ခန္ဓာကိုယ် ကြီးကို ပြုပြင်ပေးနေရသကဲ့သို့ မိမိတို့၏ စိတ်ထားကိုလည်း ဗြဟ္မစိုရ် တရားလေးပါးပြည့်စုံအောင် နှလုံးသွင်းပြီး ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီး အသုံးချကြ မှသာလျှင်ငြိမ်းချမ်းသာယာသော လောကကြီး ဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။
ပုညကြိယာ (၁၀) ပါး
ကောင်းမှု - ကုသိုလ်- ပုည - ပုန်း - ဘုန်းသို့ အဆင့်ဆင့်ကူးပြောင်းခေါ်ဝေါ်လာကြရာ ယခုအခါ ဘုန်းကြီး သည်ဆိုလျှင် လူတိုင်းနှစ်သက်ကြပေရာကောင်းမှုများခြင်းသည်သာ ဘုန်းကြီးကြကြောင်း သိအပ်ပေသည်။
(၁) ရိုးရိုးဒါန (လှူဒါန်းခြင်း)
(၂) ပတ္တိဒါန (အမျှပေးခြင်း)
(၃) ပတ္တာနုမောဒနာ (သာဓုခေါ်ခြင်း)
(၁) ရိုးရိုးသီလ (ကာယနှင့်ဝစီစောင့်ထိန်းခြင်း)
(၂) အပစာယန (ရိုသေခြင်း)
(၃) ဝေယျာဝစ္စ (လုပ်အားပေးခြင်း)
(၂) ဓမ္မဿဝန (တရားနာယူခြင်း)
(၃) ဓမ္မဒေသနာ (တရားဟောပြောပြသခြင်း)
(၄) ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ (အယူမှန်ခြင်း)
အထက်ပါ ကောင်းမှု ၁၀ ပါး = ပုလဲရတနာ - ၁၀ ပါး သည်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင် အချိန်တိုင်းမှာလုပ်နိုင်
ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးနှင့်တင့်တယ်(ရဟန်း၊ သီလရှင်၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကလေး မရွေး) သုံးလို့မကုန် သူခိုးမခိုး/ဓားပြ မတိုက်နိုင်။
မှတ်ချက်။ ။ ပုညကြိယာ (၁၀) ပါး သည်လည်း ဟောပြောနေရုံမျှဖြင့် လမ်းမဆုံးဘဲ မိမိကိုယ်တိုင်လည်းလေ့ကျင့် သူတစ်ပါးအားလုံးကိုလည်း လေ့ကျင့်ကြစေရန်စည်းရုံးတိုက်တွန်းပြီး သတ္တ၀ါအားလုံး လေ့ကျင့်အသုံးချကြမှ သာလျှင် ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ အကျိုးရှိပေမည်။
ကေသမုတ္တိသုတ် (သို့) ကာလာမသုတ်
ဘုရားရှင်သည် နယ်စပ်ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်သော ကေသမုတ္တိရွာကြီးသို့ရောက်ရှိခဲ့စဉ်၎င်းရွာကြီးတွင် ဘုရားရှင်အရှေ့ဦးစွာတိတ္ထိပုဂ္ဂိုလ်(၆)ဦးမှ ငါဟောတာယုံ သူများပြောတာမယုံနဲ့ဆိုပြီး မှားယွင်းသော အယူဝါဒများစွာကို ဟောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ရွာသားများအားလုံး အယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီး တွေဝေနေ ကြသောအချိန်တွင် ဘုရားရှင်မှ ကေသမုတ္တိသုတ် ကို ဟောတော်မူခဲ့သည်။၎င်းးသုတ္တန်သည် ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသမျှသောအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီးများအားလုံးမှ အထူးလေးစားဆုံးနှင့်
ချီးမွမ်းရဆုံးသော သုတ္တန်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး
(၁) The Bravest Announcement
(၂) The Freedom of Though
အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ယူနေသော သုတ္တန်ဖြစ်ပေသည်။
၄င်းသုတ္တန်တွင် အချက် (၁၀) ချက်ကို ပြခဲ့ပြီး ၄င်း (၁၀) ချက်ကို ပြခဲ့ပြီး ၎င်း(၁၀)ချက်ကို အလွယ်တကူ လက်ခံယုံကြည်ခြင်းမပြုဘဲ ခေတ္တထားပြီး သေချာစိစစ်ပြီးမှယုံရန်ဖြစ်သည်။
(၁) တစ်ဆင့်စကားပြောလာသောစကားကို မယုံနဲ့အုံး
(၂) ကောလာဟလစကားကိုလည်း မယုံနဲ့အုံး
(၃) စာအုပ်ထဲကပြောတိုင်းလည်း မယုံနဲ့အုံး
(၄) အစဉ်အလာ ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် စကားကိုလည်း မယုံနဲ့အုံး
(၅) ဟိုနည်းဒီနည်း နည်းကူးချပြီးလည်းမယုံနဲ့အုံး
(၆) အတွေးကောင်းတိုင်းမှန်တယ်ဆိုပြီးလည်း မယုံနဲ့အုံး
(၇) ယုတ္တိများနဲ့ဆင်ခြင်ပေးတိုင်းလည်း မယုံနဲ့အုံး
(၈) ငါ့အယူဝါဒသာမှန်တယ်ဆိုပြီးလည်း မယုံနဲ့အုံး
(၉) လေးစားကြည်ညိုထိုက်သောသူ ပြောတိုင်းလည်း မယုံနဲ့အုံး
(၁၀) ရာ - ငါ့ဆရာပြောတိုင်းလည်း အားလုံးမှန်ပြီလို့မယုံနဲ့အုံး
မည်သည့်အယူဝါဒဖြစ်စေ ကိုယ်တိုင်သာလျှင် သိအောင်လုပ်ကြ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လျှင် မှား/မှန်၊ ဆိုး/ကောင်း ကို ကိုယ်တိုင်သိမြင် ပြီးမှ လက်ခံယုံကြည်ကျင့်သုံးကြရန် ဖြစ်ပေသည်။
(က) မိမိအကျိုးရှိ အများအကျိုးရှိဆိုလျှင် လုပ်ပါ။
(ခ) ပညာရှိသူတော်ကောင်းများက ချီးကျူးလျှင် လုပ်ပါ။
(၁) မိမိအကျိုးရှိ/အများအကျိုးရှိ (အကောင်းဆုံး)
(၂) အများအကျိုးရှိ/မိမိဘာမှမရှိ (ဒုတိယအကောင်းဆုံး)
(၃) မိမိအကျိုးရှိ/အများဘာမှမရှိ (တတိယအကောင်းဆုံး)
(၁) မိမိထိခိုက်/အများလည်းထိခိုက် (အဆိုးဆုံး)
(၂) အများထိခိုက်/မိမိဘာမှမဖြစ် (ဒုတိယအဆိုးဆုံး)
(၃) မိမိထိခိုက်/အများဘာမှမဖြစ် (တတိယအဆိုးဆုံး)
ပညာရှိသူတော်ကောင်းများက ချီးကျူးလျှင် လုပ်ပါ။
ကဲ့ရဲ့လျှင် ရှောင်ပါ။ သူယုတ်မာများ၏ ကဲ့ရဲ့မှုကို ဂရုစိုက်ရန် မလိုပါ။
(က) ဆရာကောင်း အမြန်ဆုံးရှာပြီး မှန်တိုရှင်းသောနည်းလမ်းရအောင် ချဉ်းကပ်ပါ။ (သပ္ပုရိသူပနိဿယ)
(ခ) မိမိကိုယ်တိုင် နှလုံးသွင်းမှန်အောင်လေ့ကျင့်ပါ။ (ယောနိသောမနသိကာရ)
(၁) ဘုရားရှင်၏အနီးတွင် တစ်နေကုန်မျက်တောင်ကို မခတ်ဘဲဘုရားရှင်အား ရှိခိုးပူဇော်နေခဲ့သော ၀က္ကလိ ဆိုသူရဟန်းတစ်ပါး ရှိခဲ့သည်။၄င်းရဟန်းအား ဘုရားရှင်မှ ငါ၏အသုဘခန္ဓာကြီးအား ရှိခိုးနေ၍ အကျိုးမရှိ ငါခိုင်းသော တရားများကို လေ့ကျင့်ရှုမှတ်ပါဟု စေခိုင်းခဲ့သည်။ သို့သော် ၄င်းရဟန်းမှ မကျင့်သည့်အတွက်
နောက်တစ်ကြိမ်တွင် ဘုရားရှင်က သူ၏ကျောင်းတိုက်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့လေသည်။(ဘုရားရှင်၏အလိုတော်ကျ ရှိခိုးနေရုံမျှကို မနှစ်သက်တရားတော်များအားလေ့ကျင့်ရှုမှတ်ရန် ကိုသာ စေခိုင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။)
(၂) ဘုရားရှင်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကပေါဋ္ဌိလဆိုသော မထေရ်ကြီးတစ်ပါးရှိခဲ့သည်။ ၄င်းမထေရ်ကြီးသည် လွန်ခဲ့သောဘုရား (၇) ဆူတို့ လက်ထက်တုန်းကလည်း ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ပြီး ယခုဘုရားရှင်ခေတ်
မှာလည်း ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ပြီး တပည့်ရဟန်း (၅၀၀) စီရှိသော ဂိုဏ်းကြီး (၁၈) ဂိုဏ်းတို့အား စာပေ ပို့ချသင်ကြာားပေနေသော်လည်း ကိုယ်တိုင်မကျင့်ခဲ့ပေ။သို့သော်လည်း မဂ်ဥာဏ်၊ ဖိုလ်ဥာဏ်၊ နိဗ္ဗာန်ကို မမြင်မသိသောကြောင့် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားက တုဆီပေါဋ္ဌိလ ဟူ၍ ကဲ့ရဲ့တော်မူခဲ့သည်။ ထိုအခါ
ပေါဋ္ဌိလကြီးသည်အလွန်ရှက်သဖြင့် တောကျောင်း တစ်ခု၌ (၇)နှစ်အရွယ် ရဟန္တာသာမဏေငယ်ထံမှာ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကို သင်ယူအားထုတ် သည့် အခါမှ သာလျှင်မိမိတွင် စာမာန် (မာန)ခံနေပြီး ကိုယ်တိုင်မကျင့်၍
ရဟန္တာမဖြစ်ကြောင်း အားနည်းချက်ကို သိမြင်ပြီးကျင့်လိုက်သည့် အခါမှသာ လျှင် ရဟန္တာကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။
(ဘုရားရှင်၏အလိုတော်ကျသည် စာတတ်နေရုံမျှ လမ်းမဆုံး ၊ ကိုယ်တိုင် ခန္ဓာမှာ တရားကျင့်ပြီး သိမြင်ရန်ကိုသာ နှစ်သက်တော်မူ ပေသည်။)
(၁) ကံအကျိုးပေး (၃) မျိုးဖြစ်သော ဒါန၊ သီလ၊ သမထဘာဝနာတို့သည်
လူချမ်းသာ၊ နတ်ချမ်းသာ၊ ဗြဟ္မာချမ်းသာတို့ကို အကျိုးပေးရှိသလောက်
အကျိုးပေးနိုင်ကြပြီး အကျိုးပေးပြီးလျှင် ကုန်ကုန်သွားကြ၍ သုံးလေ
ကုန်လေ အောက်သို့ ပြန်ဆင်းကြပေသည်။
(၂) ဥာဏ်အကျိုးပေး ၀ိပဿနာဘာဝနာသည် အကျိုးပေးရှိသလောက် သုံးလေ တိုးလေအပေါ်သို့တက်၍ အဆုံးတွင် မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုပေ သည်။
လင်္ကာဒီပအရှင် ၏ မေးထဲသို့ရောက်လာသော ဆောင်းပါဖြစ်ပါသည် မှတ်သင့်မှတ်ထိုက် ၊ သိသင့်သိထိုက်သောကြောင့် မျှဝေလိုက်ပါသည်။
Posted by linkardipa-ashin at 2:32 PM
မကွေးတိုင်း၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ ပူတွင်းကျေးရွာ၊ အဘယ ခေမိကာရာမကျောင်းတိုက်
နွေရာသီ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှု နှင့် အခြေခံ English grammar သင်တန်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများနှင့်အမှတ်တရ
Posted by linkardipa-ashin at 8:56 AM
မြန်မာနိုင်ငံသည် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ (၅)နိုင်ငံတို့အနက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ရာ၌ ထင်ရှား ကျော်ကြားလှသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှာ၍ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။ ကုသိုလ်ဟုဆိုရာဝယ် ကုသိုလ်သည် (၁)ဒါနကုသိုလ်၊ (၂)သီလကုသိုလ်၊ (၃) ဘာဝနာကုသိုလ် ဟူ၍ (၃)မျိုးရှိပါသည်။
ဤ၌ ဒါနကုသိုလ်အကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါသည်။ ဒါနကုသိုလ်တွင်လည်း ကျောင်းပွဲအလှူ ၊ ဘုရားပွဲအလှူ ၊ သဒ္ဓါဆွမ်းကပ်အလှူ၊ မင်္ဂလာဆွမ်းကပ်အလှူ၊ ရှင်ပြု ရဟန်းခံအလှူ အစရှိသည်ဖြင့် မြန်မာလူမျိုးများသည် ဒါနကုသိုလ်ကို များစွာပြုလုပ်လေ့ရှိ၏။ အလှူရှင်တို့၏စိတ်၌ အလှူပြုလုပ်ရလျှင် ကုသိုလ်အကျိုးကို အပြည့်အ၀ရရှိနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြပါသည်။ သို့သော် ဆင်ခြင်သင့်သည့် အချက်များစွာကို ကျွန်ုပ်တင်ပြလိုပါသည်။ တောအရပ်ဒေသများ၌ ရှင်ပြုရဟန်းခံစသည့် အလှူများပြုလုပ်လျှင် ဝက်သားကျွေးခြင်း၊ ကြက်သားကျွေးခြင်း ဟူသော ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်းဖြင့် ဧည့်ခံလေ့ရှိကြ၏။ ရိုးရိုးကျွေးမွေးဧည့်ခံရလျှင် ဂုဏ်ရှိသည်ဟုပင်မထင်ကြပါ။ ဤသို့ယူဆခြင်းသည်ပင်လျှင် အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာခြင်းဖြစ်၏။ ၀က်သားကျွေး၍ အလှူပြုလုပ်မည်ဟုဆိုလျှင် ဝက်သားပေါ်(ဝက်သတ်)မည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အလှူရှင်ဒကာနှင့်လာ၍ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းကာ လူဦးရေ မည့်မျှဖိတ်မည့်အကြောင်း၊ ဘုန်းကြီးဘယ်နှစ်ပါးပင့်မည့်အကြောင်းကို အလှူရှင်ထံမှ အတိအကျရယူပြီး ဝက်အကောင်ရေမည်မျှသတ်ရမည်ဟုခန့်မှန်း၍ ဝက်သားပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာကို မြို့၌ မရည်ညွှန်းသည်ကား မြို့သည် ပံ့သကူသားပေါများသော အရပ်ဒေသဖြစ်သောကြောင့် တောအရပ်ဒေသဟုရည်ညွှန်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်ချက်ကား အလှူရှင်သည် (၁၀)သိန်းအကုန်အကျခံကာ အလှူပြုလုပ်ပြီး ဖိတ်ကြားထားသော မိတ်သင်္ဂဟများအထံမှ အကူငွေကိုလက်ခံ၍ အလှူပြီးလျှင် ရငွေ၊ ကုန်ငွေ အရှုံးအမြတ်ကို တွက်ချက်လေ့ရှိကြပါသည်။ ဤနှစ်ချက်ကိုထောက်ကြည့်လျှင် သပ္ပုရိသဒါနသုတ်၌ “အတ္တာနဉ္စ ပရဉ္စ အနုပဟစ္စ ဒါနံ ဒေတိ။ မိမိကိုလည်းကောင်း သူတပါးကိုလည်းကောင်း မထိခိုက်စေမူ၍ လှူဒါန်းရမည်” ဟု မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်နှင့် အလွန်ပင်ဆန့်ကျင်လျှက်ရှိပါသည်။ မိမိကို မထိခိုက်မနစ်နာစေ၍ လှူခြင်းဟူသည် တစ်ဆယ်တတ်နိုင်လျှင် တစ်ဆယ်ဖိုးသာလျှင်လှူရမည်၊ ဤသိုလှူဒါန်းလျှင် မိမိကို မထိခိုက်စေပါ။ မိမိတတ်နိုင်သည်ထက် ပို၍လှူဒါန်းလျှင် မိမိကို ထိခိုက်နစ်နာစေပါသည်။ သူတပါးကို မထိခိုက်မနစ်နာစေ၍ လှူဒါန်းခြင်းဟူသည် မိမိအလှူကို ရည်ရွယ်၍ သတ်သော အသားကျွေးမွေးဧည့်ခံခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည်။ ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်၌ “ ကုသလံ ဥပနိဿာယ ပါဏံ ဟနတိ-ကုသိုလ်တရားကို အမှီပြု(အကြောင်းပြု)၍ သူတပါးအသက်ကိုသတ်ခြင်းတည်းဟူသော အကုသိုလ်ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ ငါသာလျှင်ဤကဲ့သို့လှူနိုင်သည် တခြားပုဂ္ဂိုလ်များမလှူနိုင်ဟု မာနထောင်လွှား၍လှူဒါန်းခြင်းသည်လည်း သူတပါးကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ဤအချက်ကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
ပဋ္ဌာန်းပွဲ၊ ကျောင်းပွဲ၊ ဘုရားပွဲများ ပြုလုပ်ရာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးများ ဦးဆောင်၍ ပြုလုပ်သောကြောင့် အင်မတန် ဆင်ခြင်သင့်လှပေသည်။ ထိုအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သော ပုံပြင်တပုဒ်ကို တင်ပြလိုပါသည်။
တစ်ခါက ဝက်အမေကြီးနှင့် ဝက်သားပေါက်ကလေးများ လယ်ကွင်းပြင်တွင် အိပ်နေကြလေသည်။ ထိုအချိန်၌ တောင်သူလယ်သမားမျာသည် ၀က်သားအမိများအိပ်နေသော လယ်ကွင်းပြင်အနီးသို့ ရောက်ရှိလာလေသည်။ ထိုအခါ…..ဝက်ကလေးများသည် အသံကြား၍ လန့်နိုးလာကြ၏။
ဝက်ကလေးများ။ ။ အမေ..အမေ..ထ ထ ဟိုမှာ ခမောက်တွေ၊ ပေါက်တူးတွေ သံတူရွင်းတွေနဲ့ လူတွေလာနေပြီ ရန်သူတွေထင်တယ်အမေ သားတို့သမီးတို့ ပြေးကြရအောင်။
ဝက်အမေ။ ။အော် ဟိုလူတွေလား အဲဒီလူတွေက ကျေးဇူးရှင်တောင်သူလယ်သမားတွေပါ သားတို့သမီးတို့ရယ် ရန်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး အေးအေး ဆေးဆေး စိတ်ချ လက်ချအိပ်ကြသားတို့သမီးတို့ရေ။
အတန်ကြာသော်.. စစ်သားများ သူတို့အနီးသို့ရောက်ရှိလာပြန်လေသည်.။
ဝက်ကလေးများ။ ။ အမေ..အမေ..ထ ထ တော့ ဒီတခါတော့ တကယ့်ရန်သူတွေထင်တယ် သေနတ်တွေရော ၊ လက်ပစ်ဗုံးတွေရော လက်နက်အပြည့်အစုံပါတယ်ဗျ သားတို့သမီးတို့ပြေးကြရအောင်။
ဝက်အမေ။ ။အော်… အဲဒီလူတွေက တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ စစ်သားတွေကွယ့် အမေတို့ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူး စိတ်ချလက်ချအိပ်ကြပါကွယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။
ခဏကြာသော် .. ဘုန်းတော်ကြီးများ လယ်ကွင်းအနီးသို့ရောက်လာပြန်လေသည်။
ဝက်ကလေးများ။ ။အမေ ..ဒီတခါလာတဲ့လူတွေကတော့ ကတုံးတွေနဲ့ အောက်ကလည်း အနီရောင်တွေဝတ်လို့ ဘာလက်နက်မှတော့ ပါမလာဘူး ဒီလူတွေကတော့ သားတို့ရန်သူတွေမဟုတ်လောက်ပါဘူး နော်အမေ။
ဝက်အမေ။ ။ ဟေ..ဘယ်မတုံး ဟာ…ပြေးကြ သားတို့သမီးတို့ရေ ပြေးကြ အဲဒီလူတွေကမှ အမေတို့ရဲ့ရန်သူအစစ်ကွဲ့ မင်းတို့အဖေတုံးကလည်း အဲဒီဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဘုရားပွဲမှာပဲ အသတ်ခံလိုက်ရတာ ပြေးကြ ..ပြေးကြ။ ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
ဤပုံပြင်ကား တကယ်မဟုတ်ပါ။ ပုံပြင်သာဖြစ်သည် ။ သို့သော် ဤပုံပြင်သည် အကြောင်းမဲ့ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ဟန်မတူချေ။ အလှူဒါနကုသိုလ်ပြုကြသော အလှူရှင်နှင့် ဘုန်းတော်ကြီးများ သတိထား ဆင်ခြင်စေရန် ဖန်တီးထားဟန်တူပါသည်။ အလှူရှင်များသည် မည်သို့ သတိထားဆင်ခြင်ရဟုဆိုလျှင် မိမိပြုလုပ်သော အလှူဒါနသည် ဖြစ်နိုင်မည်ဆိုလျှင် ရိုးစင်းသော ကျွေးမွေးဧည့်ခံခြင်းဖြင့် ဧည့်ခံသင့်ပေသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးများကိုလည်း ပံ့သကူသားဖြင့်သာလျှင် ဆွမ်းကပ်သင့်ပေသည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်လေးကို အနည်းငယ်တင်ပြလိုပါသည်။ အညာဒေသ ကျေးရွာတရွာ၌ ကျောင်းရေစက်ချပွဲ တခုရှိသည့်အတွက် အလှူရှင်သည် အကျယ်ချဲ့လိုဟန် ရှိပုံမရချေ။ သို့အတွက်ကြောင့် ကျောင်းရှိသံဃာတော်သုံးပါးနှင့်သာ ရေစက်ချတရားနာပြုလုပ်လို၏။ ဘုန်းတော်ကြီးများကို ဆွမ်းကပ်ဖို့အတွက် ကြက်တကောင်သွားဖမ်းရန် ဒကာတယောက်ကို တာဝန်ပေးလေ၏။ တာဝန်ပေးခံရသော ဒကာသည် အကျွနု်ပ်ကို လာ၍တိုင်ပင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုဒကာကို အကြောင်းစုံရှင်းလင်းပြသရ၏။ “ဘုန်းကြီးဆိုတာ ဒိဋ္ဌ ၊ သုတ ၊ ပရိသင်္ကိတ-လို့ဆိုတဲ့ မြင်သား ၊ ကြားသား ၊ ယုံမှားသံသယရှိတဲ့အသားတွေကို မစားကောင်း မစားအပ်ဘူး ၊ မြင်သားဆိုတာက မိမိရဲ့ရှေ့မှာတင် သတ်ဖြတ်နေတဲ့ အသားကိုလည်းမစားရဘူး ၊ ကြားသားဆိုတာက သတ္တ၀ါတကောင်ကို သတ်ဖြတ်နေတဲ့အသံကြားလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ သတ်နေတယ်လို့ သူတပါးက ပြောသံကိုကြားရလျှင်သော်လည်းကောင်း မစားရဘူး၊ ယုံမှားသံသယရှိတဲ့အသားဆိုတာက အသားဟင်းတခွက်ကိုမြင်ကြပြီဆိုပါစို့ ဒီအသားဟင်းတခွက်သည် ငါ့အတွက်များ ရည်ရွယ်၍ သတ်ထားတဲ့အသားလေလားလို့ ယုံမှားသံသယရှိလျှင်လည်း မစားကောင်း မစားအပ်ဘူး လို့ဆိုတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ဒကာအနေနဲ့ အဲဒီသွားဖမ်းမယ့်ကြက်ကို သွားမဖမ်းတော့ပဲ အဆင်ပြေအောင် အလှူရှင်ကို ပြောပြလိုက်ပေတော့” ဟု သေချာစွာရှင်းပြရပါသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးများသည် မည်သို့သတိထားဆင်ခြင်ရမည်ဟုဆိုလျှင် မိမိတို့ကျောင်းတွင် ကျောင်းပွဲ ၊ ဘုရားပွဲ၊ ပဋ္ဌာန်းပွဲ စသည်ပွဲများတွင် အတတ်နိုင်ဆုံး အလှူပွဲနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သူတပါးအသတ်ကို မသတ်မိစေဖို့ ဒကာများကို သတိပေးရမည် တရားဟောရမည်။ အလွန်ဆုံးပံ့သကူသား ကိုသာလျှင် ဖြစ်နိုင်သမျှအစီစဉ်ခိုင်းရမည်။ ဤကား ဘုန်းတော်ကြီးများ သတိထားဆင်ခြင်ရမည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကုသိုလ်တစ်ပဲ၊ ငရဲတစ်ပိဿာ အဖြစ်သို့မရောက်စေရန်လည်းသတိထားဆင်ခြင်သင့်လှပေသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ကုသိုလ်ပြုလုပ်ကြပြီဟုဆိုလျှင် ဘုရားတရားတော်နှင့်အညီ ပကာသနမဖက်ဘဲ နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာဖြင့် ကုသိုလ်ပြုလုပ်ကြစေဖို့ ကုသိုလ်ပြုလျှင် သတိယှဉ်ကြစေဖို့ အကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှ သတိပေးနှိုးဆော်တိုက်တွန်းရင်း…….
Posted by linkardipa-ashin at 7:11 PM
17-10-2010 ပ၀ါရဏာ၏ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း သုံးလောကထွဋ်ထား ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည် သာသနာဖြန့်ဖြူးရာ ဗဟိုဌာနချုပ် သဖွယ်ဖြစ်သော သာဝတ္ထိပြည်...
၁၅-၅-၂၀၀၉ ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ် ပါဠိ+မြန်မာ ကိုစံ _ ခန္ဓာငါးပါးပျောက်ဆုံးခြင်းတရား ကိုတာ _ တွေးသူများ ကိုတာ + _ လူငယ်တို့ရဲ့ အနာဂါတ်...
ပန်းကံ့ကော် ရွှေစံကား ငွေသားနု စံပယ်မှန်။ မုလေး၊ ခတ္တာ နှင့် ရွှေရင်းမာ* ၊ ကြာ ခ၀ဲ ဖွဲ စ နှင်းလျှံ၊ သဇင် ကျန် ခွာတန် နှင့် ပေါက်လဲ။ ပွ...
၀တ္ထုများ(အမျိုးသားစာရေးဆရာများ ) ကံချွန် - အပျိုစင်တို့သိဖို့2(06/27) ကံချွန် - အပျိုစင်တို့သိဖို့ ၃ (06/27) ကံချွန် - အင်တာဖီးနဲ့ ...
14-7-2010 အားလုံးတို့သည်ဗဟုသုတရရုံမဟုတ်ဘဲလက်တွေ့လေ့ကျင့်ရန်နှင့်အကျိုးရှိအောင်အသုံးချရန် ဖြစ်သည်။ (Buddha’s Teachings are not for Knowle...
29-10-2009 အလှူရေစက်လက်နှင့်မကွာ လှူဒါန်းကြသော မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတို့ နယ်ပယ်၌ “ကျောင်းမှာ သိမ်၊ သင်္ကန်းမှာ ကထိန်” ဟူသော ဆိုရိုးစကားလေးကို လူတိုင...
မြန်မာနိုင်ငံသည် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ (၅)နိုင်ငံတို့အနက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ရာ၌ ထင်ရှား ကျော်ကြားလှသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်...
၀ိပဿနာ အခြေခံ ဆောင်ပုဒ်များ
29-10-2009 ၁။ မျက်စိ, အဆင်း ၊ အလင်းဆုံရင် ။ မြင်, တွေ့ , ခံစား ၊ မှတ်သားစီရင်။ မရှုမြင်ခိုက် ၊ မြင်ကြိုက် စွဲခင် ။ ကံဘ၀ ၊ ဖြစ်ရ ကောင်းဆိ...
15-5-2009 Bhikkhu Pesala _ The Debate of King Milinda Dhamma Dhuta Dr Ashin Pannissara _ How to Practice Meditation ...
မကွေးတိုင်း၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ ပူတွင်းကျေးရွာ၊ အဘယ ခေမိကာရာမကျောင်းတိုက် နွေရာသီ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှု နှင့် အခြေခံ English grammar သင်တန်း ကျောင...
Blog contents © လင်္ကာဒီပအရှင် 2010. Blogger Theme by Nymphont.